Axmed Godane & 2 sarkaal oo la xaqiijiyey dhimashadooda iyo Hogaanka cusub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Axmed Godane & 2 sarkaal oo la xaqiijiyey dhimashadooda iyo Hogaanka cusub
MAREEG 6 September 2014 7 September 2014
-Shabaab ayaa goor dhow xaqiijiyay geerida Hogaamiyahooda Axmed Cabdi Godane iyo labo ka mid ah abaanduulayaasha Ciidamada, kadib markii ay ku geeriyoodeen duqeyntii Isniintii Mareykanka uu ku qaaday meel ka mid ah Shabeelaha Hoose.
War qoraal oo la soo geliyay bogaha internet ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Hogaanka Shabaab uu soo saaray bayaan ku qoran luqadaha English-ka iyo Carabiga.
Bayaanka ayaa ayaa lagu sheegay in Amiirkii Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Abuu Zubeyr iyo saraakiil kale ay ku shahiideen duqeyntii Mareykanka uu ka fuliyay Koofurta Soomaaliya, sida lagu qoray bogga Al-Shabaab taageera.
Sidoo kale Hogaanka cusub ee Al-Shabaab ayaa loo magacaabay Sheekh Axmed Cumar (Abuu Cubeyda), kaasoo bedeli doona Hogaamiyihii hore Axmed Cabdi Godane Abuu Zubeyr.
Bayaanka ka soo baxay Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sii wadayaan dagaalka, isla markaana uu sii soconayo xiriirkii ay la lahaayeen Ururka Al-Qaacida.
Shalay ayay aheyd markii dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaaliya ay si rasmi u shaaciyeen in la dilay Hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, afar maalmood kadib duqeyntii agagaarka Sablaale ee Shabeelaha Hoose.
Dowladda Soomaaliya: Ma jirto shirkad shidaal oo heshiis la geli karta Maamul Goboleed